Inbox Unified dia mahatonga ny fitantanana fifandraisana amin'ny PMS anao ho mora kokoa
Inbox Unified (Beta)
Tantano amin'ny alàlan'ny fitaovana afovoany iray ny fifandraisanao rehetra - na amin'ny vahiny, na ny mpiasa, na ny olon-kafa. Ampifangaro am-pahamendrehana ny mailaka, SMS ary ny fandefasan-kafatra OTA.
Hainay ny fanambinao ...
Ny fifandraisana amin'ny vahiny dia mety ho mavesatra ny manara-maso azy, satria ny orinasan-trano fanofana vakansy dia mety manana mpiasa marobe miandraikitra ny serasera ho an'ny vahiny. Noho izany, ny olona iray dia mety hamaly ny fangatahana iray ary ny olon-drehetra ao amin'ny ekipa dia tokony hampandrenesina hatrany.
Ankoatr'izay, ny fifandraisana dia matetika mitranga amin'ny sehatra maro - telefaona finday ho an'ny fandefasan-kafatra, a mpitantana fantsona izay mitantana fifandraisana amin'ny fantsona sasany fa tsy ny hafa, ary boaty mailaka iray na maromaro mampiasa mpamatsy toa Gmail.
Ny fiantohana ny fahazoan'ny VA sy ny mpiasa lavitra ny fandefasana sy fandraisana hafatra an-tsoratra dia fanamby ho azy manokana. Ankoatr'izay, ny fanovana tsy an-kijanona eo anelanelan'ny sehatra hamakiana sy hamaliana ireo serasera ho an'ny vahiny dia mety hanjary ho mandreraka. Inbox azo ovaina sy mitambatra no ilaina.
Ahoana ny fomba hanampian'ny Zeevou's Unbox Inbox?
Ny Inbox Unified dia mamela anao hanafatra ny mailaka rehetra, na avy amin'ny an Ota ary mifandraika amin'ny famandrihana, na fangatahana ankapobeny momba ny serivisinao avy amin'ny tompona. Midika izany fa afaka miditra amin'ny hafatra rehetra sy ny mailaka avy amin'ny toerana afovoany ao anaty boaty mitambatra ny ekipanao iray manontolo. Raha jerena fa mitantana ny serasera amin'ny fantsona, ary koa ny mailaka vahiny sy mailaka hafa ary fandefasana hafatra an-tsoratra, mamela ny ekipa handrindra am-pahombiazana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny toerana afovoany anaty boaty mitambatra.
Raha ny Zeevou's Unified Inbox dia manana fampiasa amin'ny chat, ohatra amin'ny fitantanana fifandraisana amin'ny vahiny amin'ny sehatra Airbnb, manome ihany koa ny fampiasa atolotry ny mpanome tolotra mailaka mahazatra izy io, ary mihoatra lavitra noho ny ankamaroan'ny famelana ny fifandraisana tsy misy tohiny amin'ireo ekipanao.
Ny mpikambana ao amin'ny mpiasa rehetra, ny ekipa noforonina tao anatin'ny Zeevou, ary ny marika rehetra ampiasanao hivarotra ny fanananao dia manana adiresy mailaka mandroso napetraka ao anatin'ny Zeevou izay ahafahanao manangana lalàna mandroso avy amin'ny mpamatsy mailaka / domain anao. Ity dia manome fahafaha-mavesatra avo lenta amin'ny fiantohana fa ny marikao sy ny haavon'ny fomba ofisialy tiana dia hita amin'ny mailaka mivoaka, ary misy ny fivezivezena mora amin'ny fifandraisan'ny olona miaraka amin'ny vahiny sy ny ekipa misy antoko ivelany. Ambonin'izany, manome antoka izy fa ny serasera rehetra tonga dia alefa mivantana amin'ireo olona tompon'andraikitra ary voafetra ho an'ny mpampiasa manokana ny fidirana amina hafatra sasany.
Mampiasa ny namboarina tanteraka fandefasana hafatra mandeha ho azy vahaolana, azonao atao ny mamorona modely anao manokana mba hampidirina ireo miovaova amin'ny faritra samihafa amin'ny rafitra. Azonao atao ihany koa ny manondro amin'ny fotoana izay tokony hampiatoana ny mpamaky isan-karazany mandritra ny fizotry ny famandrihana. Ohatra, amin'ny alàlan'ny default, amin'ny fotoana mahavoa an'i Zeevou ny famandrihana, na aiza na aiza toerana alehany, dia nandefa mailaka fanamafisana mandeha ho azy ilay vahiny ho ampahan'ny. fanodinana famandrihana mandeha ho azy. Voatosika hiditra ny adiresy mailaka azy ireo ny vahiny, ary manomboka amin'izany dia halefa any amin'ny adiresy mailaka ny mailaka rehetra.
Ny serasera rehetra miditra sy mivoaka dia hita amin'ny fizotry ny fotoana eo amin'ny fijerin'ny resaka Inbox Unified anay. Ankoatr'izay, raha misy ifandraisany amin'ny famandrihana manokana, ny pitsopitsony momba izany famandrihana izany dia hiseho eo ankavanany ka tsy mila manarato amin'ny antsipirian'ny famandrihana ianao ary afaka mandray fanapahan-kevitra mialoha ary manatsara ny hafainganan'ny valiny. vahiny.
Naoty: Azafady, mariho fa ity endri-javatra ity dia mbola ao amin'ny Beta ary mety mbola tsy miasa tanteraka araka ny niniana natao na mety misy fisehoan-javatra fanampiny izay mbola eo am-pandinihana ary mbola tsy navotsotra.
← Feature teo aloha
Feature manaraka →